Uncategorized – hareerley News
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay galabta ayaa kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya kulankan oo ka dhacay Xarunta Qaramada Midoobay ee New York waxaa khudbado ka jeediyay masuuliyiin uu ka mid yahay Wakiilka Gaarka ah ee Qaramaada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan; Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira; Guddoomiyah Guddiga Madaxabanaan […]
Posted on November 22, 2019 November 22, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Xukuumada FS ayaa digniin adag u dirtay maamulkii hore ee Jubbaland, waxaana ay sheegtay in tilaabo laga qaadi doono hadii ay isku dayaan in ay hor istaagto qorshaha cusub ee dowladdu ku wajaheyso degaanada maamulka Jubbaland. War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa lagu sheegay in qorshaha cusub ee soo xulista baarlamaanka Jubbaland iyo doorashada […]
R/W kheyre iyo Wafdigiisa Oo Si Haboon loogu Soo dhaweeyey Magaalada Marka:-(Sawiro)
Waxaa si wanaagsan loogu soo dhaweeyey Wafdi uu hogaaminayey R/W kheyre kaas Oo Gaarey Magaalada Marka . Wafdigaan Oo Ka koobnaa heer Fedaraal iyo heer Maamulba ayaa waxaa si kalgacaltooyo leh u soo dhaweeyey dhamaan Shacabka Reer Marka kuwaas Oo ku qeylinayey Soo dhawoow mudane Ra’iisal Wasaare iyagoo Markaasina Farxadi laga dheehan karey Wajiyadooda, R/w […]
Posted on September 15, 2019 September 15, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Wareegii ugu dambeeyay ee wadahadaladii u dhaxeeyay kooxda Talibaan iyo Mareykanka ayaa la soo gabagabeeyay. Wadahadaladan ayaa waxay ka socdeen muddooyiinkii ugu dambeeyay caasimada dalka Qadar ee Doxa. Ma cadda in wax heshiis ah ay gaareen labada dhinac ee Mareykanka iyo Taalibaan. Saraakiiska Mareykanka iyo kuwa Taalibaan ee wadahadalada ka qayb galayya ayaa waxay sheegeen […]
Posted on December 5, 2018 Author Hareerley News	Comment(0)